1 Samuel 25 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
25 Ɛbae sɛ Samuel+ wui, na Israel nyinaa boaboaa wɔn ho ano besũũ+ no, na wosiee no ne fie nkyɛn wɔ Rama.+ Na Dawid sɔree, na osian kɔɔ Paran sare so.+ 2 Ɔbarima bi tenaa ase wɔ Maon+ a n’adwuma wɔ Karmel.*+ Ná ɔbarima no yɛ onipa kɛse paa; ná ɔwɔ nguan mpem abiɛsa ne mmirekyi apem, na na ɔretwitwa ne nguan ho+ wɔ Karmel. 3 Ɔbarima no din de Nabal,+ na ne yere din de Abigail.+ Ná ne yere no nim nyansa+ yiye na ne ho nso yɛ fɛ, na ne kunu de, na n’asɛm yɛ den na ne nneyɛe nye;+ ná ɔyɛ Kaleb+ aseni. 4 Na Dawid tee wɔ sare so hɔ sɛ Nabal retwitwa ne nguan ho nhwi.+ 5 Enti Dawid somaa mmerante du, na Dawid ka kyerɛɛ mmerante no sɛ: “Monkɔ Karmel, Nabal nkyɛn na munkobisa sɛnea ne ho te,+ me din mu. 6 Mokɔ a, monka nkyerɛ me nua no sɛ, ‘Ensi wo yiye,+ na ensi wo fie ne nea wowɔ nyinaa yiye. 7 Mate sɛ woretwitwa nguan ho. Yɛne wo nguanhwɛfo no ara na ɛtenae.+ Yɛampoopoo wɔn,+ na nna a wɔde tenaa Karmel nyinaa, wɔn biribiara anyera. 8 Bisa w’ankasa mmarima no, na wɔbɛka akyerɛ wo, na ma me mmarima no nnya w’anim dom, efisɛ yɛaba da pa. Enti yɛsrɛ wo, nea wo nsa bɛka biara, fa ma wo nkoa ne wo ba Dawid.’”+ 9 Ɛnna Dawid mmarima no kɔe, na wɔkɔkaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ Nabal wɔ Dawid din mu, na wɔtwɛnee. 10 Nanso Nabal buaa Dawid nkoa no sɛ: “Hena ne Dawid,+ na hena ne Yese ba no? Nnansa yi, nkoa a wɔaguan afi wɔn wuranom nkyɛn adɔɔso.+ 11 Memfa m’aduan+ ne me nsu ne me nam a makum atwitwa ama me nguan ho twitwafo no mma mmarima a minnim faako a wofi mpo?”+ 12 Ɛnna Dawid mmarima no dan wɔn ho sii kwan so, na wɔsan kɔe kɔkaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ no. 13 Ɛhɔ ara na Dawid ka kyerɛɛ ne mmarima no sɛ: “Obiara mfa ne nkrante mmɔ n’asen!”+ Enti obiara faa ne nkrante bɔɔ n’asen, na Dawid nso de ne nkrante bɔɔ n’asen. Na wodii Dawid akyi, mmarima bɛyɛ ahanan, na ahanu tenaa wɔn nneɛma ho.+ 14 Nso ná mmarima no biako akɔka akyerɛ Nabal yere Abigail sɛ: “Hwɛ, Dawid tuu abɔfo fi sare so behyiraa yɛn wura, nanso wateɛteɛ wɔn ayeyaw wɔn.+ 15 Mmarima no yɛɛ yɛn yiye sɛ, na wɔampoopoo yɛn, na nna a yɛne wɔn nantew wuram no nyinaa, yɛn biribiara anyera.+ 16 Wɔyɛe sɛ ɔfasu+ wɔ yɛn ho awia ne anadwo, nna a yɛne wɔn wɔ hɔ rehwɛ nguan no nyinaa. 17 Na afei hwɛ na hu nea wobɛyɛ, na mmusu na ɛrebɛba+ yɛn wura ne ne fie nyinaa so, efisɛ ɔyɛ ɔbarima huhuni+ a obi ntumi nkasa nkyerɛ no.” 18 Ɛhɔ ara na Abigail+ yɛɛ ntɛm faa paanoo ahanu ne bobesa+ nsuhina abien ne nguan anum a wɔasiesie,+ ne nkyewe+ susukora anum, ne bobe tetare+ ɔha, ne borɔdɔma aba a wɔabɔ no atɔwatɔw+ ahanu, na ɔde soaa mfurum. 19 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne mmerante no sɛ: “Monsen nni me kan,+ na midi mo akyi.” Na ne kunu Nabal de, wanka hwee ankyerɛ no. 20 Na ɛbae sɛ bere a ɔte afurum no so+ resian bepɔw no ahintawee mu no, ɔnkɔhwɛ a Dawid ne ne mmarima na wɔresian ba yi. Enti okohyiaa wɔn. 21 Dawid de, na waka sɛ: “Ɔbrɛ na mabrɛ agu kwa sɛ mebɔɔ oyi nneɛma nyinaa ho ban sare no so; nea ɔwɔ nyinaa mu biako mpo anyera,+ nanso hwɛ, bɔne na ɔde retua papa a meyɛe so ka.+ 22 Sɛ ebedu anɔpa+ na magyaw ɔbarima+ bi wɔ ne fie a, Onyankopɔn ntua Dawid atamfo ka na ɔmfa bi nka ho.”+ 23 Bere a Abigail huu Dawid ara pɛ, ɔyɛɛ ntɛm si fii afurum no so, na ɔkotow Dawid anim na ɔde n’anim butuw fam.+ 24 Afei ɔhwee ne nan ase+ kae sɛ: “O me wura, ma asodi no mmra me so+ mmom; mesrɛ wo, ma w’afenaa nkasa w’asom,+ na tie w’afenaa asɛm. 25 Mesrɛ wo, mma me wura mmfa ne koma nnkɔ ɔbarima huhuni+ Nabal yi so, na sɛnea ne din te no saa na ɔte. Ne din de Nabal, na agyimisɛm ne no na ɛte.+ W’afenaa de, manhu me wura mmarima a wosomaa wɔn no. 26 Enti me wura, sɛ́ Yehowa te ase+ na wo kra nso te ase yi,+ Yehowa ayi wo afi mu+ na woammedi mogya ho fɔ,+ sɛ wode w’ankasa wo nsa bɛtɔ were.+ Na ma w’atamfo ne wɔn a wɔpɛ me wura bɔne no nyɛ sɛ Nabal.+ 27 Na akyɛde+ a w’afenaa de abrɛ me wura yi, fa ma mmerante a wodi me wura anammɔn akyi+ no. 28 Enti mesrɛ wo, fa w’afenaa+ bɔne kyɛ no, na Yehowa bɛkyekye daa fie+ ama me wura efisɛ Yehowa ko na me wura reko;+ bɔne de, wɔrenhu bi wo ho wo nna nyinaa.+ 29 Na sɛ onipa sɔre tiw wo na ɔhwehwɛ wo kra a, Yehowa wo Nyankopɔn+ bɛkyekyere me wura kra wɔ nkwa bɔtɔwa+ mu, ne nkyɛn; nanso w’atamfo kra de, ɔbɛtow no sɛ ade a efi ataabo+ mu. 30 Na ɛbɛba sɛ Yehowa bɛyɛ papa a waka wɔ me wura ho no nyinaa, enti ɔbɛyɛ wo Israel so panyin.+ 31 Mma me wura nnhwie mogya nngu kwa,+ na w’ankasa woamfa wo nsa antɔ were+ anyɛ biribi anhaw w’ahonim, na anto me wura koma hintidua. Yehowa bɛyɛ me wura yiye, na ɛyɛ a kae+ w’afenaa.” 32 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Abigail sɛ: “Nhyira nka Yehowa, Israel Nyankopɔn+ a ɔsomaa wo behyiaa me nnɛ yi! 33 Nhyira nka wo nyansa,+ na nhyira nka wo sɛ woayi me afi mogya ho afɔdi+ mu na m’ankasa mamfa me nsa antɔ were.+ 34 Na sɛ́ Yehowa, Israel Nyankopɔn a wamma manyɛ wo bɔne+ no nso te ase yi, sɛ woanyɛ ntɛm ammehyia me+ a, anka ade bɛkye anɔpa no na ɛnkaa Nabal fie ɔbarima+ biako mpo.” 35 Ɛnna Dawid gyee nea ɔde brɛɛ no no ne nsam, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Foro kɔ wo fie asomdwoe mu.+ Hwɛ, matie wo nne, na mahwɛ w’anim.”+ 36 Akyiri yi Abigail baa Nabal nkyɛn, na ɔbɛtoe sɛ watow pon wɔ fie te sɛ ɔhene bi pon,+ na Nabal ani agye ne komam, na wabow+ titaa; na wanka asɛm ketewa anaa kɛse bi ankyerɛ ne kunu kosii sɛ ade kyee. 37 Na ɛbae sɛ ade kyee anɔpa a nsã no atetew Nabal ani so no, ne yere kaa nsɛm yi kyerɛɛ no, na ne koma+ wui ne mu, na ɔyɛe sɛ ɔbo. 38 Ɛno akyi bɛyɛ dadu no, Yehowa bɔɔ+ Nabal ma owui. 39 Dawid tee sɛ Nabal awu, na ɔkae sɛ: “Nhyira nka Yehowa a wadi m’asɛm+ ayi m’ahohora+ na wayi me afi Nabal nsam na wamma n’akoa anyɛ bɔne,+ na Yehowa ama Nabal bɔne adan agu n’atifi!”+ Na Dawid somae sɛ wɔnkɔka nkyerɛ Abigail sɛ ɔbɛware+ no. 40 Enti Dawid nkoa no kɔɔ Abigail nkyɛn wɔ Karmel, na wɔne no kɔkasae sɛ: “Dawid asoma yɛn wo nkyɛn sɛ ɔrebɛfa wo aware.” 41 Ɛhɔ ara na ɔsɔre bɔɔ ne mu ase, na ɔde n’anim butuw fam+ kae sɛ: “W’afenaa ni, na mɛyɛ abaawa ahohoro me wura+ nkoa nan ho.”+ 42 Ɛnna Abigail+ yɛɛ ntɛm sɔree, na ɔtenaa+ afurum so, na ne mmaawa baanum dii n’akyi, na osiim ne Dawid abɔfo no kɔe, na ɔbɛyɛɛ ne yere. 43 Ná Dawid afa Ahinoam+ a ofi Yesreel+ nso, na mmea baanu no nyinaa bɛyɛɛ ne yerenom.+ 44 Saul de, na ɔde ne babea Mikal,+ Dawid yere no ama Lais ba Palti+ a ofi Galim+ no aware.
^ Ɛyɛ Yuda bepɔw so kurow a ɛda Hebron anafo; ɛsono Bepɔw Karmel.